UYICHAPHAZELA NJANI INDLELA UCARLY CRISTMAN AMELANA NGAYO NEMVULA NGOMHLA WAKHE WOMTSHATO - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato I-Instagram Influencer uCarly Cristman usixelela indlela ajongana ngayo nemvula ngemini yakhe yomtshato
I-Instagram Influencer uCarly Cristman usixelela indlela ajongana ngayo nemvula ngemini yakhe yomtshato
I-albhamu yomtshato kaCarly Cristman. EChicago, eIllinois. (Ityala: USara Postma)
Ngu: Joyce Chen 05/11/2018 ngo-3: 00 PM
UCarly Cristman akazange avumele imvula ngemini yakhe yomtshato ukuba ibeke isamper ngosuku lomtshato wakhe. Isitayile sokunxibelelana kunye nobuntu beendaba zentlalo buyabalisa Ingcaciso ukuba yena nomyeni wakhe ngoku, uCody Carson, khange bacingele ukujika okungalunganga kwemozulu, kodwa izinto, njengoko besenza, ziye zavela ngokugqibeleleyo ekugqibeleni.
Kwakuyinto entle kakhulu eChicago rhoqo ngeMigqibelo ekhokelela kumtshato wethu, emva koko saba nokuduma kwezulu okuphambeneyo okuhlala kuphela ngexesha lomsitho wethu. Ngokukrakra, utsho. Kodwa ndinombulelo kuba sikwazile ukuthatha iifoto ngaphandle emini kwaye umnyama emva koko wawumangalisa ngokupheleleyo. Ngombulelo sakhetha indawo eyayinokhetho olukhulu lwangaphakathi xa kunokwenzeka ukuba siyingenise ngaphakathi!
UCristman, 29, kunye noCarson, 30, babenethemba lokutshintshiselana ngezibhambathiso phezu kophahla lwendlu kuba kulapho uhambo lwabo oluya ngakweli phondo lwaqala khona: ngokukaCristman, uCarson wacebisa eluphahleni iinyanga ezisixhenxe phambi komtshato wabo ka-Okthobha u-2017. Sasisazi ukuba sifuna ukutshata edolophini eChicago, kwaye xa ndabona uphahla olwaluyinxalenye yendawo yethu yaziva inomdla kwaye ikhethekile, utshilo.
Hayi ukuba utshintsho lwezicwangciso luchaphazele i-vibes elungileyo yosuku lwabo olukhulu, nangona kunjalo. UCristman uxelele I-Knot ukuba xa bejonga ngasemva emtshatweni kwaye bebhiyozela nabantu abathandayo abali-120, angatsho ngokunyanisekileyo ukuba lolona suku lubalaseleyo.
Ndonwabile kakhulu ngalo lonke usapho lwethu olusenyongweni kunye nabahlobo ukuba ekugqibeleni sazi ukuba sithandana kangakanani, utsho ngalo mzuzu xa babebhengezwa njengendoda nomfazi. Ukwenza ukuzibophelela phambi komntu wonke kwakumangalisa.
Apha, ezinye iinkcukacha malunga nosuku olukhulu lukaCristman.
Esi sibini sitshatele kwiWyndham Grand Hotel ekumbindi wedolophu yaseChicago, indawo enomdla kubo bobabini, kodwa izicwangciso zabo zenziwa zanzima kukuba bona ngokwabo bebengahlali eChicago ngeloxesha. Ngethamsanqa, indawo yayilungiselelwe ukunceda.
Sasineendwendwe ezazivela kulo lonke ilizwe-nangaphandle kwelizwe-ke siyazi ukuba sifuna umnyhadala kunye nolwamkelo lwethu lube kwindawo enye, utshilo. Sasihlala eCalifornia ngelixa sasicwangcisa umtshato eChicago, ke ukukhetha indawo eyayinendawo yokutyela kunye nokuhonjiswa eyakhelwe ngaphakathi yayiludibaniso olukhulu kuthi.
Umtshato kaCristman-Carson wawungumtshato omnyama osesikweni, ngoko ke kwavakala ukuba ingubo yomtshato kaCristman ngokufanayo yayiphethe obunye ubuhle kunye nepizzazz. Isinxibo sam somtshato sasiyinto endingazange ndicinge ukuba ndingayikhetha, kodwa ndathandana nayo okokuqala xa ndizama ngayo, utsho ngengubo yakhe engenamtya kaPnina Tornai. Yayikhazimla ngokungathi andizange ndayibona ngaphambili. Yayintle kakhulu! Ndiyithandile into yokuba ibingafani nenye into endakha ndakhe ndanxiba ngayo-okanye ndaphinda ndanxiba kwakhona. Ngokwenene yayiyilokhwe yanye-ebomini.
Ndihlala ndisazi ukuba ndifuna iilokhwe zasebukhosini zibe yisilivere, utshilo. Ndazifumana iilokhwe zabo ngaphambi kokuba ndifumane ezam! UCristman uqinisekisile ukugcina ixabiso lentengo liphantsi (ngaphantsi kwama- $ 200) ukuba aqwalasele yonke imali amantombazana awayeyifaka kumtshato womtshato ngaphandle. Abahlobo bakhe e-L'Oreal Paris (uCristman ungummeli woluhlobo) nabo bathathe inxaxheba kumhla omkhulu, bencedisa ekulungiseleleni ifoto yomtshato womtshato kunye neenwele kunye nokwenza izithambiso.
UCarson wayegcina izinto zeklasi ngombala omnyama we-tux kunye ne-tie tie, kunye nabagadi bakhe ngokufanayo banxibe i-tuxes ezimnyama kunye namaqhina amnyama. Onke amadoda ayenxibe iiroses ezimhlophe njengee-boutonnieres.
Njengomntu oshukumisayo kwimidiya yoluntu, zonke iinkcukacha zibaliwe. Kwaye xa isiza kwindandatho yakhe yokuzibandakanya, uCristman uthi wayeyazi kakuhle into ayifunayo: idayimani esikiweyo ye-emerald enedayimane elula. Kuncede ukuba wayekade esebenza kwiiprojekthi kunye noTacori; xa kwafika ixesha lokufumana iringi efanelekileyo kuye, uCarson wadibana noTacori ukwenza i-dazzler efanelekileyo.
Ngokuhambelana nomxholo wakhe omhlophe, omnyama, kunye nesilivere, uCristman wayigcina intyatyambo yakhe ilula kwaye intle. Zonke iintyatyambo zethu zazingamarosi amhlophe ngokwahluka okwahlukileyo- iiboutonnieres ezilula, iintyatyambo ezimhlophe zeentyatyambo, amagqabi amhlophe eentyatyambo zokuphoswa, kwaye ke amakhulu kakhulu, amaqhekeza esitetimenti ngexesha lokwamkela nolwamsitho, utsho.
Sibe neyure yecocktail silandela umsitho wethu, kwaye imvula ibisandula ukucoca iindwendwe zethu
angaphuma aye kuphahla lwendlu kwaye abone umnyama omangalisayo owawungaphaya kwendawo, utshilo uCristman, esongeza ukuba i-champagne kunye neeshizi ezigcadiweyo zanikwa ngexesha le-cocktail. Isidlo sangokuhlwa, yena noCarson bafuna iindwendwe zabo ukuba zigcine amandla abo kunye nemenyu ye-surf kunye ne-turf.
Ikhekhe, ebalulekileyo, yeza kwiincasa ezimbini ezahlukeneyo: ikeyiki ephindwe kabini yetshokholethi kunye nebhotolo ebushushisi, kunye nekhekhe le-funfetti kunye ne-vanilla yeembotyi ezinqabileyo. Elinye lawona maxesha akhumbulekayo kaCristman osusela kwimini enkulu lade labandakanya isilayi sesonka esimnandi esibhakwe. Owona mzuzu wam womtshato ndiwuthandayo emva komtshato, xa kwakufuneka sibuyele ehotele siyokutya ikhekhe kunye kwaye ekugqibeleni sifike ekubeni yindoda nomfazi, utshilo. Yayiyeyona mvakalelo ilungileyo!
Fumana umbono ogqibeleleyo womtshato ngokuqala nge-Knot's Style Quiz, apha.
Ungatshata njani kwinkundla yamatyala e ky
Ikhowudi yokunxiba esemthethweni yamadoda